मनोरञ्जन Archives - News from Shivasatakshi Nagarpalika
दुधे माविमा सामूहिक देउसी भैलो
दुधे / शिवसताक्षी नगरपालिकाको राष्ट्रिय रमणीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय दुधेमा सामूहिक देउसी भैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । तिहारको दोश्रो दिन विद्यालयको मैदानमा रंगोली बनाएर दिप प्रज्वलन गर्दै देउसी खेलिएको हो । सांस्कृतिक परम्परा र…
गुप्तचरले उडाइदिएकाे धर्मराज थापाको त्यो गीत
काठमाडौं / ८ माघ २००८ को राति सिंहदरबार कब्जा गरेपछि डा. केआई सिंह (पछि प्रधानमन्त्री) तिब्बत निर्वासनमा थिए । सिंहलाई फर्काउन काठमाडौंमा विभिन्न अभियान चलाइएका थिए । यस अभियानमा सबैभन्दा सक्रिय संगठन थियो– ‘डा. केआई सिंह मित्र हितैषी…
झापा / कमेडी च्याम्पियन दोस्रो सिजनको उपाधि भरतमणि पौडेलले जितेका छन् । फाइनलमा विक्की अग्रवाल र सन्तोष थापालाईपछि पार्दै ताप्लेजुङका भरतमणिले उपाधि चुमेका हुन् । उपाधि जितेसँगै भरतले २५ लाख र कार पुरस्कार पाएका छन्…
काठमाडौं / बलिउड कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाको निधन भएको छ । उनको हृदयघातका कारण निधन भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । ४० बर्षको उमेरमा सिद्धार्थको निधन भएको हो । उनको पार्थिव शरीरलाई अहिले मुम्बइको कपुर…
काठमाडौँ / नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नयाँ वर्षलाई सबैभन्दा ठूलो अवसर मानिन्छ । नयाँ वर्षमा रिलिज भएका फिल्मले लगानी सुरक्षित मात्र गर्दैनन्, व्यावसायिक नाफा पनि आर्जन गर्ने गरेका छन् । त्यही भएर नयाँ वर्षमा फिल्म रिलिजका…
नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको मित्रता गज्जबको छ । यी दुइका अनुसार, उनीहरु महिनामा २९ दिन बोल्दैनन् । उनीहरुको कुनै न कुनै बहाना झगडा पर्छ । तर, पनि यो जोडीको मित्रता बलियो छ…